यस कारण सिलवाल आईजीपी बन्न सक्छन - inaruwaonline.com
यस कारण सिलवाल आईजीपी बन्न सक्छन
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ०७, २०७३ समय: ४:१६:५२
नेपाल प्रहरीमा अहिले आईजीपी को बन्दा ? भन्ने विषयले सरगर्मी बढाएको छ । वर्तमान आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधी सकिए सँगै नयाँ आइजीपीका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । अर्यालको म्याद सकिएपछि नेपाल प्रहरीले २५ औँँ आईजिपी पाउनेछ । नेपाल प्रहरीको अबको आइजीपी को बन्छ ? भन्ने चासो प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर बढ्न थालेको छ । प्रहरी प्रमुख आईजीपी अर्याल अवकास हुने मिति नजिकिदै गर्दा आईजीपी हुने दौडधुप अहिले सुरु भएको छ । काम भन्दा पनि राजनितिक र वाहिय फोर्स लगाएर आईजीपी बन्ने दाउँमा केहि भष्ट्र प्रहरी अधिकृतहरु पनि खुलेर लागेका छन ।
प्रहरी अधिकारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्दा प्रहरी प्रशासनको चेन अफ कमाण्ड नै विग्रीएको छ भन्दा फरक नपर्ला । आइजीपी बन्नेलाई भन्दा पनि आफू अनुकूल आइजीपी बनाउन राजनीतिक दलहरु भित्रभित्रै होमवर्कले पनि प्रहरी संगठनको आच खस्कदो छ । केहि डिआईजी आईजीपीको चक्करमा भारत सम्म पुगेर हारगुहार सम्म गर्ने भ्याए । नेपालमा राम्रो काम गर्ने नसक्ने अनि चाकडी गर्ने लिप्त डिआईजीले प्रहरी संगठनको आँच गिराए । तर अर्यालपछि नेपाल प्रहरीको भावी आईजिपीमा वरियतामा एक नम्बरमा रहेका एक मात्र डिआईजी नवराज सिलवाल छन् । वरियतामा सिलवाल सँगै डिआईजी प्रकाश अर्याल दोस्रो, जयबहादुर चन्द तेस्रो र वमबहादुर भण्डारी चौथो नम्वरमा छन उनीहरु सबै शक्तिकेन्द्रको लविङमा ब्यस्त छन ।
के प्रहरी प्रमुख चाकडीले पाउँने पद हो ? किन हुदैन कामको मुल्याकन ? यही कामको मुल्याकन हुन्छ भन एक प्रहरी अधिकृतले सिंगो प्रहरी संगठनलाई हेर्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन सफल डिआईजी सिलवाल जिउँदो प्रमाण हुन । उनी आफैमा स्वच्छ छवि भएको प्रहरीमा गनिन्छन । प्रहरी संगठन भित्र मात्र नभई नागरिक समाजमा पनि इमान्दार र चुनौतिसंग जुध्न सक्ने क्षमता भएको उनी प्रहरी संगठनका आइजीपीका एक नम्वरको प्रवल दावेदार हुन ।
उनी अहिले सम्म प्रहरी संगठनको हिरो नै हुन भन्दा फरक नपर्ला । यसरी एक जना देशका इमान्दार प्रहरीलाई प्रमुख हुन नदिने नियत राखेर हिड्ने केहि उच्च प्रहरी अधिकृतहरुको ब्यावहार सुध्रियोस्। यदी प्रहरीमा साच्चै परिर्वतन गर्ने हो भने राजनितिमा लागेर हिडेका दल,मन्त्री र नेताहरुले सिलवाललाई आईजीपी वनाउँनुको विकल्प छैन । प्रहरी कर्मचारीहरु नेताको घरदैलोमा जाने हैन आफ्नो संगठनको निर्णय मान्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले अवको प्रहरी प्रमुख प्रहरीमा राजनितिक दलको चाकडी भन्दा पनि कामले नाम कमाएका अधिकृतलाई सिफारीस गर्नु पर्ने देखन्छि । सिलवालले नेपाली जनतामा आस जगाएका छन । सिलवाल आईजीपी बने प्रहरी संगठनको आत्मावल अझै उच्च हुने पक्का छ । संगठन भित्र भएको फोहोर पनि वडाल्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको सिलवाल चाडै आईजीपी वनुन जनताको शुभकामना ।
जनताले रुचाएका सिलवाल
समग्र सबै हिसावले हेर्ने हो भने जनमानसमा छाएका डिआईजी नवराज सिलवाल आम नेपाली जनताले रुचाएको डिआईजी हुन । देशका अधिकांस जनता तथा नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरु पनि डिआईजी सिलवाललाई आईजीपी वनाउँन सामाजिक सञ्चालमा खुलेका देखिन्छन । प्रहरीका केहि भष्ट अधिकृत बाहेक सबै प्रहरीको सिंगो फोर्सले सिलवाललाई रुचाउँछ । वन्यजन्तु, मानव तस्करी, एटीएम ठगीदेखि कल वाइपास हुदै अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलवाट हुने सुनतस्करीको पर्दाफास गरे सँग जनताको नजरमा हाईहाई वनेका सिलवाल नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनु पर्छ ।
काम गरेर जनताको मन जित्ने डिआईजी सिलवाल प्रहरी प्रमुख भए नेपाल प्रहरी अझै सुध्रनेमा कुनै दुईमत नहोला । नेपाल प्रहरीको एक नम्वरमा रहेका डिआईजी सिलवाललाई आईजी वनाउँन कुनै राजनितिक दलहरुले हस्तक्षेप गर्ने मिल्दैन । आफ्नो निकट वनाउँन आईजीपी वनाउँने खेलमा ाभन्दा पनि कामको आधारमा आईजीपी वनाउँने परम्पराको विकास गरे मात्र देशमा भष्ट्र्रचारी र तस्करीहरु निरुत्साहित हुने छन । हैन भने देशमा तस्करीहरुको विगविगी हुने पक्का छ ।
कामका, चर्चाले सिलवाल अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । त्यस कारण राजनितिक दलहरुले आफ्नो मान्छे भन्दा पनि कामको हिसावमा मुल्याकन गरुण । डिआइजी नवराज सिलवालले भर्खरै मात्र अमेरिकाबाट अवार्ड सम्म जितेका दक्ष डिआईजी हुन । शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने मूल जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान , नियन्त्रण देखि थुप्रै कामहरु गरेर जनताको मन जित्न सफल सिलवाल आईजीपी हुनुको विकल्प छैन । संगठनको सधै सिर उच्च राख्न महत्वपूणै योगदान गदै आएको सिलवालको योगदनालाई सवै राजनितिक दलहरुले समर्थन गर्नु पर्छ ।
कसरी हिरो भए सिलवाल ?
पूर्वी नेपालमा जन पक्षीय काम गरेर चर्चा कमाएर काठमाण्डौ गएका सिलवालले सिआईवीमा अहिले सम्मकै उत्कृष्ट काम गरे । भागी भागी हिडेका हत्यारा देखि तस्करहरुलाई पक्राउ गर्ने महत्पूर्ण भुमिका खेलेका सिलवाल त्यहाँ पनि त्यतीकै हाईहाई छन । अदालतले दुई अरब पचास करोड जरिवाना तोकेको पदम बहादुर कुँवर देखि लामो समय देखि लुकेर वसेको अपराधिहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउँन निकै महत्पूर्ण काम गर्ने सफल भए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सकको रुपमा काम गर्न अनुमति लिएका सबैको शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनुसन्धान गरेर धमाधम पक्राउ गरे । ठुलो संख्यामा सुन मात्र पक्राउ गरेनन जनतालाई शान्तीसुरक्षा कायम गराउँन पनि उनको उतिकै भुमिका छ । नेपाल प्रहरीका डिआईजी नवराज सिलवाल प्रहरी संगठनका एक कहलिएका चर्चित नाम हो ।
उनको नाम चर्चामा मात्र हैन ब्यावहार र काममा पनि उस्तै छ । एउटा प्रहरी संगठनको उच्च ओदाहमा वसेर प्रहरीकै आचरण सुधारमा समेत लागेका डिआईजी सिलवाललाई मन पराउँने प्रहरीहरु अत्याधिक छन । यस अर्थमा पनि सिलवाल एक निष्ठावान नेपाल प्रहरी कर्मचारी हुन । संगठनकै सुद्धिकरणमा खरो रुपमा लागेका सिलवाल देशभरी हाई हाई छन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हेडक्वार्टरका प्रमुख समेत रहेका डिआईजी सिलवाल बर्षौं अघिका फाइल खोजेर अपराधिलाई कष्टडीमा ल्याउँन सफल भए । समग्र देशको हितमा लाग्ने सिलवाललाई नेपाली जनताले सलाम गर्ने पर्छ ।
प्रहरीहरु ब्यावहारीक मुखी हुनु पर्छ भन्ने अभियना नेपाली जनताहरुको लागी राम्रो हैन र ? यसरी समाजमा भएका अपराधहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने अभियनामा होमिएका डिआईजी सिलवाललाई राजनितिज्ञहरुले पनि साथ दिनु पर्छ । पैसाको पछि कुद्ने प्रहरी अधिकारीलाई नै चुनौती दिने उनको अभियानमा हामी जनता किन नलाग्ने ? जटिल र गहन प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानका लागि स्थापना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उनको गरेको कामको प्रसंसा हामीले किन खुलेर नगर्ने ? कसैको प्रलोभन,दवाव सम्म नमान्ने उनी साचै नेपालको उदाहरणीय प्रहरी अधिकृत हुन । पूर्व वस्दा ४ सय ३९ किलोमिटर क्षेत्र खुल्ला सिमाना भएको पूर्व क्षेत्रमा हुने साना हतियार, लागु औषधको कारोवार र चोरी तस्करीवाट हुने सजिलो आम्दानीका कारण हुने अन्य सामाजीक अपराध नियन्त्रण गर्ने सफल भए । लोभ लालचमा नपर्ने डिआईजी सिलवालकै कारण मातहतका घुस खाने प्रहरीहरु समेत सुध्रिए ।